Kooxda Paris Saint-Germain oo soo diiday dalabkii ay Real Madrid ka gudbisay Neymar Jr – Gool FM
(Paris) 22 Agoosto 2019. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa la soo warinayaa inay ku guuldarreystay isku daygeedii ugu dambeeyey oo ay ku doonaysay inay Neymar Jr kaga soo qaadato Paris Saint-Germain.
Iyadoo uu suuqa kala iibsiga xiddigaha uu ka harsan yahay wax ka yar labo todobaad, Neymar ayaan weli salka u dhigin ka dhaqaaqistiisa garoonka Parc des Princes, inkastoo ay meesha ka baxday qorshihii ku aaddanaa mustaqbalkiisa ee ahaa in arrintiisa kooxda la xaliyo.
Real Madrid, Barcelona iyo Juventus ayaa dhammaantood la sheegayaa inay ku jiraan tartanka saxiixa 27-sano jirkan, inkastoo ay u muuqato in soo iibsiga uu yahay mid aad uga fog dhammeystirka.
Sida uu warinayo Wageyska L’Equipe, Real Masdrid ayaa ku guuldarreysatay dalabkii ugu dambeeyey oo ay ka gubdisay Neymar kaasoo ahaa 100 milyan oo gini oo lagu daray Keylor Navas, James Rodriguez iyo Gareth Bale.
Barcelona ayaa la soo warinayaa sidoo kale inay isku dayeyso inay xiddiga dib ula soo wareegto oo ay ku soo qaadato heshiis amaah ah oo qiyaar loo siinayo inay wada iibsato xagaaga soo socda.